गलबन्दीकी लजालु अञ्जली अधिकारि र मोडेल अलिशा शर्मा प्रेम गीत ३ मा ? को होला त दाबेदार ? अलिशा किन रिसाइन हेर्नुहोस भिडियो « OSNepal.com :: Latest News,Breaking News, Latest, Politics, World, Entertainment, Sports, Technology, Interview, Nepal News
गलबन्दीकी लजालु अञ्जली अधिकारि र मोडेल अलिशा शर्मा प्रेम गीत ३ मा ? को होला त दाबेदार ? अलिशा किन रिसाइन हेर्नुहोस भिडियो
गायक प्रकाश सपुत र गायिका शान्ति श्री परियारको नयाँ दोहोरी गीत ‘गलवन्दी‘ यतिबेला सामाजिक सञ्जालमा ‘हट टपिक’ बनेको छ । तर, गीतका गायक गायिकालाई ओझेलमा पार्ने गरी सर्वाधिक चर्चा भइरहेको छ, मोडल अञ्जली अधिकारीको ।गीतको भिडियोमा अञ्जलीको ‘एक्सप्रेसन’ ले सबैलाई लठ्ठ बनाएको छ । उनी अति लजालु गाउँले युवतीको रुपमा देखिएकी छिन् । सामान्य शब्द र औसत स्तरको गीतलाई भिडियोले जुरुक्कै माथि उठाएको छ । ३ दिनमा २६ लाखभन्दा बढीले हेरिसकेको भिडियो एक महिनाभित्र एक करोड क्लवमा प्रवेश गर्नेमा शंका छैन ।
टिकटकमा पनि यो गीत अत्यधिक लोकप्रिय बनिरहेको छ।यसअघि प्रकाश सपुतकै ‘बोलमाया’ बोलको गीतमा पनि अञ्जलीले मोडलिङ गरेकी थिइन् । सो मर्मस्पर्शी गीतमा पनि अञ्जलीको अभिनयलाई रुचाइएको थियो । पैसा कमाउन विदेश गएका श्रीमान लाश बनेर बाकसमा आउँदा गर्भवती श्रीमतीको बेदनालाई उनले जिवन्तरुपमा प्रस्तुत गरेकी थिइन् । सोही गीतको ‘पि्रक्वेल’ बताइएको गलबन्दीमा चाहिँ उनले विहे पूर्व रोदीमा दोहोरी गाएको देखाइएको छ । गायक प्रकाश सपुतले भिडियोमा अञ्जलीलाई साथ दिएका छन् । भिडियो हेर्नुहोस
दुबै मृगौला फेल ३२ वर्षिय गंगा बहादुर सहयोगार्थ चन्दा संकलन साँस्कृतिक कार्यक्रम (भिडियो सहित)
काठमाडौँ! दुबै मृगौला फेल भएर हाल डायलसिस गराईरहेका लमजुङका ३२ वर्षिय गंगा बहादुर गुरुङ (राम)को
भ्वाइसका ४ फाइनलिष्टमध्ये आरिफले हार्नुको कारण यस्तो !
काठमाडौं । ‘द भ्वाईस अफ नेपाल सिजन २’ का ४ फाइनलिष्ट मध्य आरिफ राउत मिडियामा
झापामा राम लिम्बूलाई यति ठुलो स्वागत र सम्मान, उर्लियो जनसागर (भिडियो)
काठमाडौं । दी भ्वाईस अफ नेपालका बिजेता राम लिम्बू आज गृह नगर झापा आएका छन्
The Cartoonz Crew फुट्नुको भित्री कारण अर्कै रहेछ ! सबिन कार्कीले पहिलो पटक मुख खोले (भिडियो हेर्नुस)
डान्स ग्रुप ‘कार्टुन क्रु’ स्थापना भएको १ दशक भइसक्यो । यो समुहको नाम, परिकल्पना र